Sacuudiga oo Hakiyey Xoolihii Soomaaliya
Qaar ka mida ganacsatada Xoolaha ee ku sugan magaalada Jeddah ayaa VOA la wadaagay qoraal ay sheegeen inuu ka soo baxay Wasaradda Deegaanka, Beeraha iyo Biyaha ee Sucuudiga, kaas oo sheegayey in si ku-meel gaadh ah loo hakiyey Xoolihii Soomaalida ee dalkaas tegayey.
Nuux Daahir Camuud oo ku sugan magaalada Jedda ayaa sheegay in amarkan ka soo baxay Sucuudiga loo qaybiyey qaar ka mida ganacsatada xoolaha isla markaana amar lagu siiyey in la hakiyo xoolaha iyada oo loo sababeeyey arrimo dhinaca caafimaadka ah.
Go'aankan ay ganacsatada Soomaalidu sheegtay in dawladda Sucuudiga uu ka soo baxay, illaa haatan may xaqiijinin dawladda Soomaaliya iyo dawladda Sucuudiga, inkasta oo saraakiil Soomaali ah oo aan la hadalnay ay VOA u sheegeen inay maqleen warkan hase ahaatee ay mar dambe ka hadli doonaan.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli meelo badan oo Soomaaliya ah ay ka jiraan abaaro ba'an oo saamayn ku yeeshay noloshii dadka reer guuraaga ah, haddiiba tallaabadani sidaas u dhaqan gashona waxay sii adkaynaysaa xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya ka jirta, taas oo madaxda Soomaalida iyo hay'adaha Caalamiga ahiga ay baaqyo ka soo saareen.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku waraystay Nuux Daahir Camuud.
Wareysi: Nuux Daahir